ပညာရေးမှာ ထူးချွန်တဲ့သားကြောင့် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဝိုင်းချစ်ရဲ့ ပီတိ | Duwun
အဌမတန်းမှာ ထူးချွန်ဆု ရရှိပါတယ်တဲ့။
လူရွှင်တော် ဝိုင်းချစ်တစ်ယောက် ပညာရေးမှာ ထူးချွန်လှတဲ့ သားဖြစ်သူကြောင့် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူလို့ နေပါတယ်. သူကတော့ လက်ရှိမှာ ချစ်ရတဲ့ ဇနီးချောနဲ့ အတူ သားသမီး ၃ ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖေဖေ ဖြစ်ပါတယ်.
လူရွှင်တော် ဝိုင်းချစ်ရဲ့ သားဖြစ်သူ မောင်လင်းပြည့်ဖြိုးကတော့ အဌမတန်းကို A အဆင့် ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်. ဝိုင်းချစ်ကတော့ သားကြီး အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်လို့ နေပါတယ်.
'' ဒီနေ့ ကျွန်တော့်သားကြီး ဆုယူပါတယ်'' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် သားဖြစ်သူရဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေနဲ့ အတူ မိသားစု ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အမှတ်တရ တင်ခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ပရိသတ်တွေကလည်း Comment ကနေ တဆင့် ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်.
လူရွှင်တော် ဝိုင်းချစ်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ အင်ပါယာ ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့ နဲ့ အတူ ဇာတ်သဘင်ပွဲတွေမှာ ဖျော်ဖြေနေတာကို တွေ့ရပါတယ်. သူ့ကိုတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ဟာသသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်. ဝိုင်းချစ်က ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်.
ဝိုင်းချစ်ဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသမီး ၃ ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. သားကြီးရဲ့ နာမည်ကိုတော့ အိမ်ခေါ်နာမည် Lucky လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်. သားလတ်ကိုတော့ Happy လို့ နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး သမီး အငယ်ဆုံးလေး နာမည်ကိုတော့ Snow လို့ နာမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. ဝိုင်းချစ်ရဲ့ ဇနီးချော နာမည်ကတော့ မသက်သက်ဇော်လို့ ခေါ်ပါတယ်.
ဝိုင်းချစ်ရဲ့ ဇနီး မသက်သက်ဇော်ဟာ အရင်တုန်းက ဇာတ်သဘင်ပွဲတွေမှာ ဖျော်ဖြေလေ့ရှိတဲ့ မင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. ဇနီးဖြစ်သူကို ချစ်လည်းချစ် သဝန်လည်း တိုတာကြောင့် ဝိုင်းချစ်က အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ မကခိုင်းတော့ဘူးလို့ မီဒီယာအင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်. ရိုက်ကူးရေး၊ အငြိမ့်ပွဲတွေ မရှိတဲ့အချိန်ဆို မိသားစုနဲ့ပဲ အိမ်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေး နေတယ်လို့ သိရပါတယ်.